Baarlamaanka Hirshabelle oo Waqtiga ka dhamaaday & kulamo xasaasi ah oo ka Socda Jowhar | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Baarlamaanka Hirshabelle oo Waqtiga ka dhamaaday & kulamo xasaasi ah oo...
Baarlamaanka Hirshabelle oo Waqtiga ka dhamaaday & kulamo xasaasi ah oo ka Socda Jowhar
Muddo xilleedka Barlamanka Maamulka Hirshabelle ayaa waxa uu Ku egyahay Bishaan October iyadoo Looga Fadhiyo madaxda Maamulka Hirshabelle ay soo dhisaan Barlamankii Labaad ee Bedali lahaa Midkaan waqtiga Ka idlaaday .
Guddoomiyaha Baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabelle Sheekh Cismaan Barre ayaa kulan xasaasi ah kula qaatay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle guddiga farsamada iyo soo xulista Baarlamaanka Labaad ee maamulka Hirshabelle.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle iyo guddiga farsamada ayaa kawada hadlay arrimaha soo xulista Baarlamaanka labaad ee Hirshabelle iyo sidii loo dardar galin lahaa xareynta Odayaasha dhaqanka.
Guddoomiye Cismaan Barre ayaa sidoo kale ku sheegay qoraal uu soo saaray inuu ka dhageystay guddiga farsamada waxyaabaha u qabsoomay iyo qorshayaasha kale ee u dhiman isagoo ugu dambeyntii ugu baaqay iney dardar galiyaan howlaha shaqo ee horyaala guddiga farsamadda.
Sheekh Cismaan Barre ayaa sidoo kale ugu baaqay dhamaan qeybaha kala duwan ee bulshada Hirshabelle sida Siyaasiyiinta, Duubabka dhaqanka, iyo bulshada inteeda kale iney ka qeyb qaataan dhismaha cusub ee Hirshabelle loo dhan yahay.
kulanka guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle iyo guddiga farsamadda soo xulista Baarlamaanka labaad ee Hirshabelle ayaa imaanaya xili dhawaan Jadwalkii doorasho ay soo saareen guddiga farsamadda uu si cad u diiday Madxweyne Maxamed Cabdi Waare.
Ugu dambeyntii Xaalada Siyaasadeed ee maamulak Hirshabelle ayaa Waxa ay U muuqataa Mid kacsan kadib markii ay dhamaatay Muddo Xil heynta Golayaasha sharci dejinta Maamulkaasi
Maqaal horeRW Rooble Oo La Kulmay Guddoomiyaha Baarlamaanka Koonfur Galbeed
Maqaal XigaTaliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo soo bandhigay Qorsho cusub oo amniga Lagu sugayo
140 ruux oo geeriyooday kadib markii doonta uu dabqabsaday
Gudoomiyaha Gobolka Sh/Hoose oo Tababar u soo xeray Guddiga Xasilinta iyo...